Delivra dia manisy fanamafisana sy fizarana e-varotra | Martech Zone
Ny departemantan'ny varotra amerikana tatitra fa ny varotra an-tserasera dia nahitana mihoatra ny ampahatelon'ny fitomboan'ny varotra antsinjarany tamin'ny taona 2015. Ny fikarohana dia naneho ihany koa fa ny fivarotana an-tserasera dia nahitana 7.3 isan-jaton'ny totalin'ny varotra antsinjarany tamin'ny 2015, tafakatra 6.4 isan-jato tamin'ny 2014.
Tompon'andraikitra amin'ny fampielezana marketing amin'ny mailaka mihoatra ny fito isan-jato amin'ny fifanakalozana e-varotra rehetra, mahatonga azy io ho fitaovana faharoa mahomby amin'ny varotra ecommerce ao ambadiky ny asa fikarohana an-tserasera, izay mirehareha amin'ny tahan'ny fiovam-po 15.8 isan-jato. Na eo aza ny fahombiazany, tsy ny mpivarotra an-tserasera rehetra no noforonina mitovy amin'ny teti-bola sy ny mpiasa.
Ho an'i Neil Berman, mpanorina ary tale jeneralin'ny Delivra, mazava ho azy fa ny ekonomia e-varotra ankehitriny dia mamela malalaka ny varavarana ho an'ireo mpanome rindrambaiko marobe hanompo am-pahombiazana ny filan'ny mpivarotra isan-karazany.
Tsy tsiambaratelo fa ireo mpivarotra ambongadiny 100 manerantany dia afaka mampiasa ny rindrambaiko mailaka be pitsiny indrindra sy matanjaka satria manana ekipa varotra e-varotra lehibe sy be fandavana hianatra ny habetsaky ny fampiasa ho amin'ny fanatanterahana mahomby. Betsaka ihany koa ireo mpivarotra antsinjarany eo an-toerana sy isam-paritra tsy misy ekipa mpivarotra atokana amin'ny tranga maro. Zava-dehibe ho an'ireto mpivarotra ireto ny manararaotra ny mailaka fahombiazana mitondra amin'ny e-varotra, saingy mila sehatra iray izy ireo izay manome ny tena ilaina amin'ny fanamorana ny fampiasana sy ny fampiharana eo noho eo.
Delivra Commerce Overview
Varotra Delivra no fonosana farany azo avy amin'ny mpamatsy rindrambaiko marketing mailaka ary natokana ho an'ny automatisation marketing e-commerce. Mifototra amin'ny fampifangaroana amin'ny Magento, Shopify, ary WooCommerce, ny sehatra dia mety indrindra ho an'ireo mpivarotra antsinjarany kely sy antonony — misy na tsy misy tohanana toerana misy biriky sy fotaka — ary ahafahana manao fampielezan-kevitra amin'ny mailaka aorian'ny fividianana mailaka. Ny mailaka fandaozana ny sarety manokana dia iray amin'ireo endri-javatra malaza indrindra hatramin'izay fikarohana mampiseho fa ny 60 isan-jaton'ny mailaka sarety nilaozana dia miteraka fidiram-bola, ka ny ankamaroan'izany dia nitranga tao anatin'ny 24 ora voalohany nandefasana ny mailaka.
Ny fampifangaroana ny valin'ny lozisialy an-tserasera amin'ny rindrambaiko dia manampy ny mpivarotra an-tserasera amin'ny fampiroboroboana ny fanolorana vokatra, fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa, ary ny fanamarihana indray ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka mandeha ho azy. Varotra Delivra ahafahan'ny mpampiasa mamorona fizarana mandeha ho azy mifototra amin'ny angona fividianana synceda avy any Magento ary WooCommerce sokajy, na Shopify karazana vokatra, hivarotana vokatra ary hampifandray indray ireo mpividy taloha. Ho fanampin'izany, ny mpampiasa dia afaka manara-maso ny fizarana fidiram-bola avy amin'ny mailaka handrafetana ny mailaka ho avy ary handefa hafatra sarety mora foana nilaozana hahazoana vola miditra ary hampitombo ny ROI marketing ROI.
Ny fampidirana ny sarety fiantsenana manokana an'ny mpampiasa dia misy fizarana mandeha ho azy mifototra amin'ny fividianana sokajy na sokajin'ny vokatra.
Varotra Delivra ireo mpampiasa koa dia afaka mamorona ny fizarany manokana hampiasaina amin'ny fitsapana mahazatra, fizahana ary mailaka nateraka. Ohatra: ny fizarana dia misy:
Fampiasana ny angona sarety nilaozana hamoronana a fampandrenesana nalefa tamin'ny mailaka
Fampiasana angona angon-drakitra mankany cross-mivarotra vokatra hafa
Fampiasana angona angon-drakitra hangataka product reviews
Seho iray lehibe ihany koa ny fahaizana mamorona "hetsika misy saina" miorina amin'ny fividianana mailaka, ahafahan'ny mpampiasa "manangana sy manadino" fanentanana mandeha ho azy rehefa mifehy ny fotoana sy ny hafatry ny fifandraisana mifandraika amin'ny varotra. Ny fisehoana misy saina dia manome alalana ny mpivarotra hanombatombana ny masonkarena ary handamina dingana iray mankany amin'ny lalana roa. Ohatra, ny mpivarotra iray dia mety misafidy ny hanombana raha misy mpandray nanokatra mailaka, tsindrio ny rohy manokana, novidina avy amin'ny fivarotana e-varotra, sns. Zava-dehibe ny hetsika misy saina satria mamela ny mpivarotra hifehy izay hatao manaraka ho an'ny mpandray, mifototra amin'ny hetsika na hetsika tsy fanaon'ny mpandray. Ny mpivarotra iray dia mety misafidy ny handefa mailaka isan-karazany, hanavao ny saha data na handefa hafatra SMS.
Varotra Delivra misy koa fampidirana miaraka amin'ny Google Analytics Ecommerce. Manararaotra ny angona avy amin'ny Google Analytics, ity fampidirana ity dia mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny metric key toy ny fidiram-bola, ny fividianana ary ny tahan'ny fiovam-po ary ny fomba anondroana azy ireo amin'ny mailaka sy mailaka ankapobeny. Ho fanampin'ny fampidirana Google Analytics, ny fandrefesana ny fandefasana mailaka dia notaterina ihany koa tamin'ny endrika manome tsipiriany momba ny topy maso ny kaonty, topimaso amin'ny mailaka, statistikan'ny fanarahana, statistikan'ny fandefasana ary fampitahana ny mailaka.
Ny fanombohana amin'ny fiasan'ny Delivra Commerce mahery dia dingana haingana ho an'ireo mpampiasa vaovao sy efa misy. Na manavao na manangana kaonty ho an'ny mpanjifa, Delivra dia afaka mampifangaro ny sehatra amin'ny angona fiantsenana ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny adiny iray eo ho eo.
Tags: mailaka sarety nilaozanadelivravarotra delivramailaka ecommercemailakagoogle analytics ecommercemagentomailaka magentoshopifyfivarotana mailakamailaka naterakawoocommercemailaka woocommerce